Ukuhlaselwa kwabantu abadala
Izidumba sisifo esibangelwa yintsholongwane. Ukuqubuka kubangela ukudumba kwamadlala weparotid. Amadlala parotid anceda ekuveliseni amathe. La madlala abekwe ngaphambili nangaphantsi kweendlebe. Le ntsholongwane iyasasazeka xa umntu okosulelekileyo ekhohlela okanye ethimla. Ikwasasazeka ngokudibana ngqo namathe omntu osulelekileyo, njengokwabelana ngezinto zokutya.
Ziintoni iimpawu neempawu zoqwilikana?
Ubuthathaka bemisipha, ukudinwa, okanye iintlungu
Umkhuhlane, intloko ebuhlungu, okanye iintlungu endlebeni okanye emhlathini
Ukudumba kunye namadlala abuhlungu kwelinye okanye kumacala omabini obuso bakho
Ukuphelelwa ngumdla wokutya, okanye iintlungu xa uhlafuna okanye uginya
Ubuhlungu okanye ukuthamba kumatyhalarha akho (emadodeni)
Kufunyaniswa njani uqwilikana?
Ugqirha wakho unokufumanisa isifo se-mumps ngokusekwe kwiimpawu zakho kunye novavanyo lomzimba. Unokufuna uvavanyo lwegazi ukuqinisekisa usulelo.
Ndingenza ntoni ukulawula iimpawu zam?
Ukuqubuka akunakunyangeka, kodwa oku kulandelayo kunokunciphisa iimpawu zakho:
Acetaminophen kuphelisa iintlungu kwaye kwehlisa umkhuhlane. Iyafumaneka ngaphandle kommiselo. Buza ukuba zingaphi na kwaye uzithathe kangaphi. Landela ukukhawuleza. Funda iilebheli zawo onke amanye amayeza owasebenzisayo ukubona ukuba ziqulathe i-acetaminophen, okanye ubuze ugqirha okanye usokhemesti. I-Acetaminophen inokubangela ukonakala kwesibindi xa ingathathwanga ngokuchanekileyo. Sukusebenzisa ngaphezulu kwe-4 gram (4000 milligrams) iyonke ye-acetaminophen ngosuku olunye.
Ii-NSAID, banokunciphisa ukudumba kunye nentlungu okanye umkhuhlane. Eli yeza liyafumaneka kunye okanye ngaphandle kommiselo. Ii-NSAID zinokubangela ukuphuma kwesisu okanye iingxaki zezintso kubantu abathile. Ukuba uthatha iyeza lokucoca igazi, ngonaphakade Buza ugqirha wakho ukuba ii-NSAID zikhuselekile kuwe. Soloko ufunda ileyibhile yeli yeza kwaye ulandele umkhombandlela.
Sela ulwelo ngokwaneleyo. Ulwelo lunceda ukuthintela ukomisa. Buza ukuba ungakanani utywala oza kusela yonke imihla. Sela amanzi, ijusi, okanye umhluzi endaweni yeziselo zezemidlalo. Unokufuna isisombululo somlomo somlomo (ORS). I-ORS inexabiso elichanekileyo lamanzi, ityuwa neswekile ekufuneka ulibuyisele kulwelo lomzimba. Buza ugqirha wakho apho unokufumana khona isisombululo somlomo sokubuyisela amanzi emzimbeni.
Yitya ukutya okuthambileyo. Oku kutya kunokupheka ukutya okuziinkozo, irayisi, iitapile ezicujiweyo okanye iiapile, okanye isuphu. Musa ukutya ukutya okune-asidi kakhulu okanye ekunzima ukuhlafuna. Oku kunokubangela ukwanda kwamathe kuze kubangele ukuba iintlungu zibe mandundu.
Phumla ngakumbi. Phumla ixesha elide kangangoko kwaye ulale ngokwaneleyo.
Faka umkhenkce. Umkhenkce unceda ukunciphisa ukudumba kunye nentlungu. Umkhenkce unokunceda ekuthinteleni ukonakala kwethishu. Sebenzisa ipakethe yomkhenkce okanye ubeke umkhenkce otyunyuziweyo engxoweni yeplastiki. Yigqume ngetawuli kwaye uyibeke kwiidlala zakho ezidumbileyo imizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 ngeyure nganye njengoko kuyalelwe.
Yintoni ekufuneka ndiyazi malunga nokugonya kokugunquza?
Isitofu sokugonya seMMR sinceda ukukhusela wena kunye nabanye abakungqongileyo kwimasisi, irubella, noqwilikana. Ugqirha wakho uza kukuxelela ukuba uyafuna na isitofu sokugonya. Ugqirha wakho uza kukuxelela ukuba uza kulifumana nini iyeza lokuthintela kunye nokuba ungaphi amanani awadingayo.
Ndingenza ntoni ukuthintela ukusasazeka kweentsholongwane?
Hlamba izandla zakho rhoqo. Hlamba izandla zakho izihlandlo ezininzi ngemini. Hlamba emva kokusebenzisa indlu yangasese, emva kokutshintsha amanabukeni, nangaphambi kokulungisa ukutya okanye ukutya. Soloko usebenzisa isepha namanzi. Hlikihla izandla zakho ezinesepha kunye, unxibelelanise iminwe yakho. Hlamba umphambili nomva wezandla zakho, naphakathi kweminwe yakho. Sebenzisa iminwe yesinye isandla ukukhuhla phantsi kweenzipho zesinye isandla. Hlamba ubuncinci imizuzwana engama-20. Yipule phantsi kwamanzi ashushu abalekayo imizuzwana eliqela. Emva koko yoma izandla zakho ngetawuli ecocekileyo okanye ngephepha. Unokusebenzisa isicoci sezandla esineziselo ezinxilisayo, ukuba isepha namanzi azifumaneki. Musa ukuchukumisa amehlo akho, impumlo, okanye umlomo ngaphandle kokuhlamba izandla kuqala.
Gquma xa ukhohlela okanye uthimla. Nxiba izihlunu ezigqume umlomo kunye nempumlo. Phosa izicubu enkunkumeni kwangoko. Sebenzisa i-engile yengalo ukuba awunayo itshefu ekhoyo. Hlamba izandla zakho ngesepha namanzi okanye usebenzise isicoci sezandla.
Hlala kude nabanye ngelixa ugula. Gwema izihlwele ngangokunokwenzeka.
Buza malunga naluphi na ugonyo onokulufuna. Thetha nogqirha wakho malunga nembali yakho yokugonya. Ugqirha wakho uza kukuxelela ukuba loluphi ugonyo oludingayo kunye nexesha lokulufumana.
Fumana umkhuhlane xa ucetyiswa unyaka nonyaka. Umkhuhlane wokudubula unikezelwa ukuqala ngoSeptemba okanye ngo-Okthobha. Iintsholongwane zomkhuhlane zitshintsha, ke kubalulekile ukuba ufumane umkhuhlane unyaka nonyaka.
Gonyelwa inyumoniya xa kucetyiswa. Esi sitofu sokugonya sicetyiswa rhoqo emva kweminyaka emi-5. Ugqirha wakho uza kukuxelela ukuba ulifumana nini iyeza lokugonya, ukuba liyafuneka.
Tsalela umnxeba kwindawo yakho yongxamiseko (911 eMelika) ukuba:
Unengxaki yokuphefumla okanye uphefumla ngokukhawuleza kunesiqhelo.
Unentlungu esiswini, isicaphucaphu, okanye ukugabha.
Ubhidekile okanye ulumkile kancinci kunesiqhelo.
Unentloko ebuhlungu engakhululwanga ngamayeza eentlungu.
Amadlala akho adumbileyo abomvu ngaphezulu kweentsuku ezisi-8.
Unengxaki yokutya okanye yokulala.
Amatyhalarha akho abomvu, adumbile, okanye abuhlungu (amadoda).
Ukhulelwe kwaye ucinga ukuba ubonakaliswe kwintsholongwane ye-mumps (abasetyhini).
indawo yefomula yeheksagoni
Ungamxhasa njani umntu kwi-linkin
Ihlala ixesha elingakanani ukusebenza
ukusezela ukutya kwimiphunga
Ngaba i-monistat cream kufuneka itshiswe
I-lipitor ibhloko ye-beta
Ngaba i-benadryl ibangela uxinzelelo lwegazi oluphezulu